Isniin, Oct 19, 2020-Kulan duco ah oo Dr. Ali Khalif Galaydh loogu sameeyay Columbus Ohio – LaacibOnline
Taariikhda Kooxda Ghana
Isniin, Oct 19, 2020-Kulan duco ah oo Dr. Ali Khalif Galaydh loogu sameeyay Columbus Ohio
October 19, 2020 Abdirisaaq	0 Comments
Isniin, October 19, 2020 (HOL) – Jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa qabtay munaasab loogu duceynayay allaha u naxariistee Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya ahaana Madaxweynihii Khatima State Dr. Ali Khaliif Galaydh.
Culumada, Ganacsatada, Siyaasiyiinta, Waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee ka soo qeybgalay ayaa duco iyo quran aqris isugu daray, waxayna alle uga rajeeyeen in uu raxmadiisa ku galado.
Waxaa laga sheekeeyay Taariikh xeeldheer oo uu lahaa Dr. Galaydh iyo sidii uu dalka ugu soo shaqeeyay , waxana intabadan masuuliyiintii ka hadlay ay diirada saareen isku daygiisii ku aadanaa in xal loo helo midnimada Soomaaliyeed kadib markii isaga oo ah Madaxweynaha Khatumo uu la fariistay dhanka Soomaaliland kana wada hadleen sidii xal loo gaari lahaa.
Masuuliyiin ay isla soo shaqeeyeen, kuwo isku xili ay ahaayeen kuwo taariikhdiisa dheegtay iyo dad kale ayaa dhamaan afka ku dhuftay in Dr. Ai Khalif uu ahaa Nin lahaa aragti cad oo ku aadan raadinta Soomaaliya mid ah iyo in laga gudbo kala qoqobnaanta.
Xiliyadiisii Siyaasadda iyo kuwii waxbarashada oo ah sida Hirka badda oo kale ayaa qeyb un laga soo qaatay waxaana ka dhex muuqanaya shaqsiga uu ahaa Dr. Galaydh iyo Hiigsigiisii mudada soo jiray.
Waxaa lagu taliyay in la siiwado Halgankiisii ku aadaanaa Soomaaliya oo markale cageheeda isku taagta iyo raadinta Soomaaliya mid ah.
Culumada ayaa ka codsaday dadka Soomaaliyeed cidii wax ka tabanaysa in ay Cafiyaan isla markaana u duceeyaan.
Dr. Ali Khalif Galaydh ayaa dhawaan ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaana aas qaran loogu sameeyay Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
← Review Of The Day 19th October 2020
Somalia: Turkey Kicks Off Training for Sixth Sna Infantry →
Arbaco, Aug 5 , 2020-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la kulmay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya
Jimco, July 24, 2020-Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in la soo afjarayo khilaafkii udhexeeyay isaga iyo dowladda federalka
Isniin, Sept 14, 2020-Ciidamada Koonfur Galbeed oo dilay sarkaal caan ah oo katirsanaa Al-shabaab
11/26/2020 Today from Hiiraan Online: Wararka Maanta- Khamiis, Nov 26, 2020 Wiil Soomaali ah oo lagu dilay Magalada Idmanton